ပိုတောင့်တယ်ထင်ရစေဖို့ အဝတ်အစား ဝတ်စားနည်း သုံးခု – Gentleman Magazine
ပိုတောင့်တယ်ထင်ရစေဖို့ အဝတ်အစား ဝတ်စားနည်း သုံးခု
သင်က နဂိုကပဲ တောင့်နေနေ၊ မတောင့်တဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမဆို ကြွက်သားနဂိုရှိတာထက် ပိုပေါ်ချင်ကြတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာကျ အဝတ်အစားတွေက သင့်နဂို ဗလကိုတောင် လျော့စေပါသေးတယ်။ အဲလိုမဖြစ်စေဖို့ သင့်မှာ ရှိနေတဲ့ ကြွက်သားပမာဏကို ထပ်တိုးဖို့ အဝတ်အစား ဝတ်စားနည်း သုံးခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. ချုပ်ရိုးတွေကို လေ့လာပါ
သင့်ပခုံးပေါ်က ချုပ်ရိုးတွေကို သေချာ ကြည့်ပါ။ သူတို့က အောက်ကို ကျနေရင် သင်က သင့်ရှပ်အင်္ကျီ ပြည့်လောက်အောင် ဗလမတောင့်ပုံ ပေါက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အတိအကျပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပခုံးပေါ် ရောက်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုရင်တော့ သင့်ပခုံးကျယ်ပုံ ပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဗလတောင့်လွန်းလို့ အင်္ကျီတောင် မဆံ့ဘူး ထင်သွားပါလိမ့်မယ်။
၂. သင်နဲ့ အတိအကျတော်တဲ့ အင်္ကျီ ရှာပါ
သင်တဲ့ အတိအကျတော်တဲ့ အင်္ကျီဟာ သင့်လက်မောင်းကြွက်သားနဲ့ ရင်အုပ် ကြွက်သားတွေကို ကောင်းကောင်း ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသားကပ်အင်္ကျီနဲ့ ကွက်တိတော်တဲ့ အင်္ကျီ ကွာတာ ရှိပါသေးတယ်။ သင့်ရဲ့ လက်မောင်းနဲ့ ပခုံးမှာ ကျပ်ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်းမှာ မကျပ်တဲ့ အင်္ကျီမျိုး ရှာပါ။ ၁ ကနေ ၅ ရာနှုန်းထိ ဆွဲအားရှိတဲ့ ချည်ရှပ်အင်္ကျီကို ရှာပါ။ ဒီပါတ်ဝန်းကျင်က ရှပ်တွေဟာ မတွန့်ကြေပဲ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကပ်နေပါလိမ့်မယ်။
၃. အကွက် ရွေးပါ
ကန့်လန့်စင်းတွေက သင့်ကို ပိုဝပုံ ပေါက်စေပြီး ဒေါင်လိုက်စင်းတွေက ပိုရှည်ပုံ ပေါက်စေပါတယ်။ သင် ပိုတောင့်ပုံ ပေါ်ချင်ရင်တော့ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး အကွက် အကွက်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို အပေါ်အောက်ဒီဇိုင်းတွေထက် ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရပါမယ်။
အပေါ်ပိုင်းမှာ အရောင်ရင့်ပြီး အောက်ပိုင်းဖျော့တဲ့ ရှပ်အင်္ကျီတွေကို ရှာဝတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ရင်အုပ်ကြွက်သားပေါ်က အရောင်ရင့်က သင့်ရဲ့ ရင်အုပ်ကြွက်သားကို ပိုကျယ်ပုံ ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်။
ပိုတောငျ့တယျထငျရစဖေို့ အဝတျအစား ဝတျစားနညျး သုံးခု
သငျက နဂိုကပဲ တောငျ့နနေေ၊ မတောငျ့တဲ့သူပဲ ဖွဈဖွဈ ဘယျသူမဆို ကွှကျသားနဂိုရှိတာထကျ ပိုပျေါခငျြကွတာပါ။ တဈခါတဈလမှောကြ အဝတျအစားတှကေ သငျ့နဂို ဗလကိုတောငျ လြော့စပေါသေးတယျ။ အဲလိုမဖွဈစဖေို့ သငျ့မှာ ရှိနတေဲ့ ကွှကျသားပမာဏကို ထပျတိုးဖို့ အဝတျအစား ဝတျစားနညျး သုံးခုကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁. ခြုပျရိုးတှကေို လလေ့ာပါ
သငျ့ပခုံးပျေါက ခြုပျရိုးတှကေို သခြော ကွညျ့ပါ။ သူတို့က အောကျကို ကနြရေငျ သငျက သငျ့ရှပျအင်ျကြီ ပွညျ့လောကျအောငျ ဗလမတောငျ့ပုံ ပေါကျနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့က အတိအကပြဲ ဖွဈဖွဈ၊ ပခုံးပျေါ ရောကျနတောပဲ ဖွဈဖွဈ ဆိုရငျတော့ သငျ့ပခုံးကယျြပုံ ပေါကျသှားပါလိမျ့မယျ။ ဗလတောငျ့လှနျးလို့ အင်ျကြီတောငျ မဆံ့ဘူး ထငျသှားပါလိမျ့မယျ။
၂. သငျနဲ့ အတိအကတြျောတဲ့ အင်ျကြီ ရှာပါ
သငျတဲ့ အတိအကတြျောတဲ့ အင်ျကြီဟာ သငျ့လကျမောငျးကွှကျသားနဲ့ ရငျအုပျ ကွှကျသားတှကေို ကောငျးကောငျး ဖျောပွနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အသားကပျအင်ျကြီနဲ့ ကှကျတိတျောတဲ့ အင်ျကြီ ကှာတာ ရှိပါသေးတယျ။ သငျ့ရဲ့ လကျမောငျးနဲ့ ပခုံးမှာ ကပျြပမေယျ့ ကိုယျပိုငျးမှာ မကပျြတဲ့ အင်ျကြီမြိုး ရှာပါ။ ၁ ကနေ ၅ ရာနှုနျးထိ ဆှဲအားရှိတဲ့ ခညျြရှပျအင်ျကြီကို ရှာပါ။ ဒီပါတျဝနျးကငျြက ရှပျတှဟော မတှနျ့ကွပေဲ သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ကပျနပေါလိမျ့မယျ။
၃. အကှကျ ရှေးပါ
ကနျ့လနျ့စငျးတှကေ သငျ့ကို ပိုဝပုံ ပေါကျစပွေီး ဒေါငျလိုကျစငျးတှကေ ပိုရှညျပုံ ပေါကျစပေါတယျ။ သငျ ပိုတောငျ့ပုံ ပျေါခငျြရငျတော့ သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံး အကှကျ အကှကျတှေ ဖွဈနတေဲ့ ဒီဇိုငျးတှကေို အပျေါအောကျဒီဇိုငျးတှထေကျ ဦးစားပေး ရှေးခယျြရပါမယျ။
အပျေါပိုငျးမှာ အရောငျရငျ့ပွီး အောကျပိုငျးဖြော့တဲ့ ရှပျအင်ျကြီတှကေို ရှာဝတျပါ။ သငျ့ရဲ့ ရငျအုပျကွှကျသားပျေါက အရောငျရငျ့က သငျ့ရဲ့ ရငျအုပျကွှကျသားကို ပိုကယျြပုံ ပေါကျစပေါလိမျ့မယျ။
Previous: ချစ်တင်းနှောခြင်း အတွေ့အကြုံသစ် ရစေဖို့ 18+
Next: ကုမ္ပဏီကို ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံနဲ့ ရောင်းလိုက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျရတဲ့အခါ..